Gmail ရဲ့ Hidden Features ဆိုတာဘာလဲ။ ➡️➡️နောက်လိုက်များ▷➡️
မေလ 12, 20210မှတ်ချက်များ 523
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့ထိုအရာကိုခံစားရသည် စာကိုစစ်ဆေးပြီးနာရီပေါင်းများစွာအကုန်ခံပြီး၊ အခြားပလက်ဖောင်းများ၊ ဂျီမေးလ်တွင်ဖြစ်တတ်သည့်အ ၀ င်စာပုံးသို့တက်ရောက်သည်။ သို့သော်၊ ဂူဂဲလ်သည်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်များကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဂျီမေးလ်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချခဲ့သည်။
သင်၏အီးမေးလ်များကို "Sleep" သို့ပို့ပါဖြေ - ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကအီးမေးလ်တွေကိုရွေးပြီး၊ ရက်စွဲအသစ်နဲ့သတ်မှတ်ဖို့အ ၀ င်စာပုံးကိုဖယ်ရှားပေးတယ်၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည် Snooze သို့မဟုတ် Snooze tool ကိုအသုံးပြုရမည်။
Self- သတိပေးချက်များဖြေ - ဂျီမေးလ်ကရက်ပေါင်းများစွာနောက်ဆက်တွဲပြhavingနာမရှိဘူးဆိုရင်အီးမေးလ်တွေကို inbox ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာအလိုလျောက်နေရာချပေးတယ်။
ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို Gmail မှပြက္ခဒိန်ဖြင့်စီစဉ်ပါပြက္ခဒိန်သည်ဂျီမေးလ်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိပြီးသင်ကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုစီစဉ်ရန်သို့မဟုတ်သတိပေးရန်ရွေးချယ်ရန်အတွက် Google application တစ်ခုဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်အဖွဲ့အစည်း လက်ခံသူထံမှလာသည့်သို့မဟုတ်တိကျသောစကားလုံးဖြင့်ဖော်ပြသောအီးမေးလ်များကိုသင်ဖွဲ့စည်းရန်ခွင့်ပြုမည့်တံဆိပ်များနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းများကိုအသုံးပြုပါ၊ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပြုလိမ့်မည်။
ဂျီမေးကသင်ဘာရိုက်မည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်ဖြေ - Gmail မှာ ၀ ါကျတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် ၀ င်လာတဲ့ message တွေအတွက်တုန့်ပြန်မှုပေးတဲ့စမတ်အင်္ဂါရပ် ၂ ခုရှိတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်ဘီလီယံနှင့်ချီသောမရေးထားသည့်စာလုံးများကိုကယ်တင်သည့်“ Smart Reply” သို့မဟုတ်“ Smart Compose” ကိုအသုံးပြုရမည်။
မျိုးစုံအီးမေးလ်လိပ်စာဖြေ - သင့်ရဲ့လိပ်စာမှာမူကွဲအမျိုးမျိုးရှိချင်ရင်၊ သင့်ရဲ့အီးမေးလိပ်စာမှာနောက်ဆုံးကာလကိုထည့်ပါ။ ဥပမာ: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] Que တစ်ဦး [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]. O [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] ဂူဂဲလ်မှတူညီသောအီးမေးလ်များပေးပို့ခြင်း၊
keyboard Shortcutsဖြေ - အချိန်ကုန်သက်သာစေတယ်၊ ​​တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ခွင့်ရတယ်၊ Pop-up box တစ်ခုနှိပ်ရမယ်။ အောက်ပါစာရင်းပေါ်လာလိမ့်မည် -
Ctrl + Enter နှိပ်ပါ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ဆိုလိုသည်။
Ctrl + Shift + ခ ဆိုလိုသည်မှာ Bcc လက်ခံသူများကိုထည့်ပါ။
Ctrl+Shift+c ဆိုလိုသည် cc လက်ခံသူများကိုထည့်ပါ။
Ctrl + ။ လာမယ့်ပြတင်းပေါက်မှကြိုတင်မဲကိုဆိုလိုသည်။
အဆင့်မြင့်ဖြတ်လမ်းများဖြေ။ ။ သူကစိတ်ကြိုက် Shortcuts တွေရှိတယ်။ စကားဝိုင်းကိုအမှိုက်ပုံးထဲမရွှေ့ခင်အထိ compose လုပ်ဖို့ window အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ရင်သူတို့အမျိုးမျိုးကွဲပြားလိမ့်မယ်။
/: ရှာဖွေရေး box ထဲမှာ cursor ထားပါ
c: အသစ်တစ်ခုကိုမက်ဆေ့ခ်ျကို compose
d: အသစ်တခု tab ကိုအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျကို compose
သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအရန်ကူးပါဖြေ - သင်၏စာများကိုအရန်ကူးလိုပါကအရန်ကူးယူထားသောအီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသို့စာရင်းသွင်းပြီးသင်ဂျီမေးလ်အကောင့်သို့ပြင်ဆင်ပါ။ ၎င်းသည်အီးမေးလ်များကိုပင်မစာအ ၀ င်သို့ပို့ပါ။
က Settings ကိုသွားပါ.
1 Gmail ရဲ့လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကဘာလဲ။
4 အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါ -